Imijaho Yesifunda Yabasafufusa Ihehe Indathane Yabagibeli — Cycling South Africa
Imijaho Yesifunda Yabasafufusa Ihehe Indathane Yabagibeli
Kuthe ingxenye enkulu yezwe laseMzansi Afrika libungaza usuku lwabasebenzi, abagibeli bamabhayisikili bebezinikele njengoba bebeseCascades MTB Park ekomkhulu lesifundazwe saKwaZulu-Natal eMgungundlovu lapho ebebezikhandla khona behla benyuka beqwala izintaba. Loluchungechunge lwemidlalo yamabhayisikili lwenzeke ngempelasonto ende kusukela ngomhlaka 30 April kuze kube umhlaka 2 May.
Uchungechunge lwemidlalo yamabhayisikili ywaKwaZulu-Natal eyenzeka ezingeni lezifundaluqhubekele kumdlalo wamanqamu wonyaka ngosuku lwesibili lalemidlalo ebiseCascades. Umphathiswa wezokuthuthukiswa kwemidlalo yamabhayisikili kwisifundazwe saKwaZulu-Natal uTyone Johns uthe lemidlalo bekungemikhulu kunayo yonke imidlalo esohlweni lwemidlalo yalonyaka kanti futhi zonke izifundazwe zaKwaZulu-Natal zoyishumi nanye bezimelwe. Abagibeli abasafufusa abayikhulu namashumi amabili nanhlanu bazinikele ngesikhathi beqophisana emjahweni oyibanga elingamakhilomitha amabili kwisigaba sama-BMX. Lomqhudelwano ubungumukhumulajezi kwaze kwafika ekugcineni.
U-Nhlanhla Thabethe oqhamuka kwisifundazwe sasoThukela edolobheni laseMnambithi ubehluleka nawukuzibamba ngethuba lokuba azoqhudelana nozakwabo abebephume ngothi lwabo kulonyaka uma uqhathanisa nangonyaka odlule: “ngonyaka odlule, ngangifike nabagibeli abayishumi nambili kanti kulonyaka sinabagibeli abangamashumi amabili. Njengoba ngangishilo ngonyaka odlule ukuthi ngalonyaka sizobuya nabafundi abathe xaxa kanti sikwazile ukukwenza lokho. Sinabo baningi abafundi abaphiwe kulomdlalo esifundeni sethu kanti sinayo inhloso nesifiso sokuba abagibeli bethu abasafufusa futhi abasebasha badlulele ezingeni elingcono futhi elikhulu.” UmfokaThabethe ubuye wathi abafundi bakhe abasafufusa baqala eminyakeni eyishumi kuya phezulu.
Oyisekela-mphathi kuMnyango weZemidlalo nokuziVocavoca uDuncan Pool uzizwe ezigqaka ngokuba umudlalo wesifunda wabagibeli bamabhayisikili abasafufusa wenzeka futhi uhlanganisa isifunda: siwubonile lomqhudelwano ukhula uya phambili kanti futhi ngaphandle kokuthi lomqhudelwano ukhulisa ikhono labagibeli abasafufutha emdlalweni wamabhayisikili, futhi lomqhudelwano uyabakhulisa namakhono okuziphilisa empilweni. Uma kugitshelwa amabhayisikili kuqhudelwana, izinga lokuqhudelana liphezulu kakhulu kanti futhi lona umqhudelwano ukhombisa ukuba yimpumelelo yize uxhaso lwezezimali luyashoda kanti nezezimali ziyamfimfa, okusho ukuthi akukho ukusho ukuthi imiqhudelwano efana nalena singasisekela kuze kube inini.”
Umnumzane uPool uqhubeke wathi kubili bona njengomnyango abakubonileyo okungaba usizo olukhulu kakhulu ukuze kuyiwe phambili: ukubonakala njengesifundwazwe esigqugquzela impilo yokuzivocavoca nokuziqeqesha hhayi ezonganeni nje kuphela kodwa nakubantu abadala futhi. Okwesibili ukuthi kukhona lengxenye eyeseka ukunqoba Kanye nokuphumelela njengomdlali. “Kuyacaca ukuthi lomqhudelwano siwusebenzisa njengesizinda sokucinga nokuthola labo badlali abayoma esiteji emidlalweni yama-Olympics, kwazi bani, namaCommonwealth games ngonyaka ka-2022 eThekwini.”
Isikole esiqhamuka kwisifunda saseMzinyathi i-Dundee Primary School sona sifike nabagibeli abayishumi nanye kanti abagibeli abahambisana noNhlanhla Sibisi sebebe yingxenye yalomcimbi isikhathi esingangonyaka manje. “Sinabagibeli abangamantombazane abayisithupha kanti abagibeli abangabafana bona bahlanu. Labagibeli ngokuhlanganyela kwabo bayawuthakasela lomdlalo kakhulu. Abazivocavoci ngesikhathi sesikole ngoba kusuke kufunda kodwa abakwenzayo ukuthi bayalinda baze bafike ekhaya ukuze bakwazi ukuzivivinya. Siyethemba futhi isifiso sethu ukuba sifike nenani labagibeli elithe xaxa ngonyaka ozayo ngoba siyakholelwa ukuba sinabo abagibeli abangagcina bengompetha lana,” esho emamatheka. “Isifundo esihamba phambili abafundi esibaqeqeshayo abasitholile ukuba indlela yokuziphatha nokuzinikela ngoba uthishomkhulu uyabatshela ukuba uma beqophisana emjahweni wabo wokuqala abadingi ukuba bajahe futhi baqede wonke amandla ngoba basuke besazoqophisana emzukiswaneni wesibili futhi ozothi uma ufike bawadinge futhi amandla. Bona basheshe bakhathale, ikakhulu kazi uma beqhudelana kumizukiswano ewumkhumulajezi kanti indlela abazihlela ngayo futhi nabazinikela ngayo iyabasiza ukuthi uma sekufika umuzukiswano wesibili ufike besanayo amandla nomoya wokuthi baqhubeke baqhudelane.”
Umgibeli uScelo Luhlongwane oqhamuka elokishini laseSikhayini ngaseRichards Bay ngaphansi kwesifunda sasoThungulu uthe abafundi bebegibelela ukuba bazizwise futhi ukuba bazijabulise ukuze bzwe ukuthi kunjani ukuba yingxenye yomqhudelwano ofana nalona. “Ngiqinisekile ukuba bakujabulelile lokhu futhi sifike nezingane eziningi esifike nazo kulomqhudelwano namhlanje. Uma seziphelele izingane ziyishumi nezikhombisa kanti iminyaka yazo iqala eshumini nanye kuze kufike eshumini nesithupha. Ngamafuphi, nginabagibeli bamantombazane abayisishiyagalombili kanti abafana bayisishiyagalolunye. Bayakuthakasela ukugibela amabhayisikili kakhulu.”
Obemele isikole sagagibeli esaziwa ngokuthi iHammardale Cycling School uGuy Watkins usebe yingxenye yalomcimbi iminyaka emibili emuva kokuthi eqale nabafundi abayishumi nesishiyagalombili kanti sikhuluma nje usenabafundi abayikhulu namashumi ayisithupha nanhlanu. Uyakubona ukubaluleka kokuthi afake abafundi bakhe emincintiswaneni lapho bezokwazi ukuzikala amandla abo ukuze akwazi ukubona ukuba sebekuliphi izinga ngokugibela nangokuqophisana nozakwabo ngokwethalente abanalo. “ngesikhathi sisaqala eHammarsdale ekuqaleni, kwakungeve kumnandi kubona futhi bekujabulela ukugibela amabhayisiki kodwa manje sesineqembu elinabagibeli abakhombisa ukuzimisela kakhulu futhi asebelinyusile izinga abaqophisana kulo. Kumanje, bazivivinya izihlandla ezintathu ngesonto kanti futhi bayingxenye yeqembu elizimisele ngokumangalisayo. Bayakhombisa ukuba banamaphupho amakhulu kanti futhi kumele baqhubeke ngalendlela uma bezoba ngcono.”
Isizinda saKwaZulu-Natal sabagibeli abasafufusa esaziwa ngokuthi iKwaZulu-Natal Cycling Development Clinic besikhona kulomqhudelwano ukuze sifundise abagibeli asebasha futhi abasaqala ukuthi ligitshelwa kanjani ibhayisikili. Abanye abafundi abebekhona bebengakaze baligibele ibhayisikili ezimpilweni zabo kanti futhi kubathathe isikhashana ukuba bajwayele ukuligibela ngaphandle kokuba babanjwe noma badinge usizo kanti abanye bona basheshile ukujwayela. Ukufunda nokujwayela kukhombise ukushiyana kubagibeli.
Umgqugquzeli walesizinda esifundisa abagibeli abasha ukugibela ibhayisikili uJohn uchazile inhloso kanye futhi nokubaluleka kwalomsebenzi abawenzayo ukuze bathuthukise lomdlalo kubafundi. “Inhloso bewukuthi sikhombise abanye abafundi ukuthi uma uqala ngqa ukugibela ibhayisikili wenzenjani kanti futhi sibakhombisile nezinye izinto ezimbalwa ezintsha kubona ezifana nokwehlisa isivinini, ukuthi wenzenjani ukuze ungawi, ukuthi izishovo kumele zime kanjani kanye nokuthi uma uhlezi kulona ibhayisikili uhlala kanjani ukuze unethezeke.”
Ekhuluma ngaso isikole lesi sokufundisa izimfundamakhwela, uJohn uthe: “Sahamba saya ezikoleni ezezinga eliphansi eLions River, yona esemaphethelweni aseHowick. Sathi uma sifika khona, othisha bakuthokozela ukuba sifike sizofundisa abafundi babo ukukwazi ukugibela amabhayisikili kanti futhi nabe benza ukuthi sisebenzisane nabo kube lula kakhulu ngoba bayakuthakasela ukuba abafundi basesikoleni sabo bathole ithuba lokuba bafunde ukugibela ibhayisikili kanti futhi kubasize ngokuba bazivocavoce ngesikhathi esisodwa.”
Uthisha ofundisa eLions River Primary School ogamalakhe uWelcome Siphiwe Mpanza uchazile ngokubaluleka kwezemidlala ezintsha kubafundi babo. “Kubalulekile ukuba abafundi bangenelele ekudlaleni imidlalo emisha. Sibanafundi abayishumi nambili abadlala umdlalo wamabhayisikili kodwa bayishumi kuphela abafikili namuhla. Saqala ukungenela umdlalo wamabhayisikili ngonyaka ka2015 kanti ngicabanga ukuthi banamaphupho amakhulu njengoba begibela amabhayisikili. Kusayinto entsha kubona kodwa uma singase silokhu sibuya kulemincintiswano, kuhamba baze babone ukubaluleka bokugibela amabhayisikili nesidingo sokukhulisa lomdlalo.”
Osukwini esizindeni lapho abagibeli ababukhali futhi abangompetha kulomdlalo bebeqophisana ngokuzungeza izihlandla ezintathu kwezinhlanu okuyibanga elevile kumakhilomitha amahlanu ukuze bathole amaphuzu e-UCI ukuze baphumelele ukuyoqophisana emidlalweni yama-Olympics eRio, okuseBrazil. Umpetha wase-Austria uGregor Raggl ogibelela iqembu iHaibike Otzal Pro Team kanye noMriske Strauss weqembu i-Novus OMX Pro Team bawudlile umhlanganiso wabagibeli abaphezulu. Kusenjalo, u-Alexander Bunn weqembu i-Team Firebike Drossiger kanye no-Danielle Strydon we-Swiss Cycles bona banqobe kumncintiswano wezingane. Lokhu kusho ukuthi bathole amaphuzu e-UCI adlula bonke abagibeli yize bekuqoshiswana liyishaya izulu.
Ekuseni ngesonto, isicoco se-SA Masters Marathon Championshiop nejezi kwaklonyeliswa abagibeli abaneminyana engamashumi amathathu nangaphezulu ngokushiyana ngeminyaka emihlanu. Labagibeli bebeqophisana ngokugibela ibanga elingamakhilomitha angamashumi ayisithupha. Ekugcineni, kumjaho wamadoda onqobile uBrandon Stewart esigabeni seminyaka engu 30-34 esikhathini esingu 02:43:51 kanti kowabesimame kuwine owakulelizwe uJeannie Dreyer ngesikhathi esingu 03:01;30.
Eminye imincintiswano ebikade iyingxenye ye-Pietermaritzburg MTB Ffestival ngosuku lwesithathu kanti futhi obekungelokugcina bekuyi-KwaZulu-Natal Schools Challenge kanye ne-Enduro ngomsombuluko umhlaka 2 May. Abagibeli abancane kunabo bonke baqale ngo09h00 ekuseni kanti inkundla ibigcwele abagibeli abaneminyaka esukela kweyisishiyagalombili kuya kweyishumi nesishiyagalombili. Obekade emele abagibeli baseGlenwood High School uDavid Munro uvumile ukuba umdlalo wamabhayisikili wasobhuqwini usukhulile kakhulu kanti futhi uyindlela elula yokwenza abafundi ukuba bazivocavoce. “njengabantu abahlala eThekwini, uma sifuna ukugibela obhuqwini siqwale izintaba sikwazi ukukwenza eGiba Gorge ePinetown noma eHolla Trails eBallito. Ukukwazi ukuza lana eMgungundlovu sizoncintisana kuyinto enkulu kakhulu. Abafana bakuthakasela kakhulu ukwehla benyuke izintaba kodwa kuningi okusamele bakufunde. Sijahe kabi ukuyoqophisana kulomncintiswano ozayo wezikole iKwaZulu-Natal Schools Series.”
Abakhonze ukuzithanqaza nokundiza emoyeni ngamabhayisikili baqophisana emahlathini aseCascades esigabeni sesine somjaho we-Enduro owaqala emuva kuka-08h00 ekuseni. Babeqhudelana begibele amabhayisikili amakhulu futhi antofontofo ukuze amelane nokundiza kanye nokuzithanqaza kanti futhi lokhu kubavumele ukuba banyuse isivinini ukuze babone ukuthi ubani oshesha kunabo bonke osukwini.
Umgibeli wakuleli futhi owanqoba kaningi kwimijaho uma kwehlela ongumpetha wezwe lonke uTiaan Odendaal wanqoba isigaba sesinesomjaho ngamasekhendi ayesehlanganisiwe angamashumi amabili nambili ngesikhathi esiyimizuzu eyishuminantathu namasekhendi angamashumi amane. Owanqoba kowabesimame uSabine “Beani” Thies owathi kukho konke ukuqophisana aseke waba yingxenye yakho, akaze aqophisane kumjaho we-Enduro ngendlela agibela ngayo.
I-Pietermaritzburg MTB Festival ibibanjelwe eCascades MTB Park kusukela ngomhlaka 30 April kuya ku 2 May kanti futhi ibiyingxenye yonkana ye-Africa Bike City Project eMgungundlovu. Lomsebenzi ongaka wokuthuthukisa ezamabhayisikili ikakhulukazi kwabafufusayo kumiswe abasebenzi, abaxhasi kanye nabagibeli baseCascadesMTB Park. Konke lokhu kwenziwa ukuze kwakhelwe imizamo yokuqophisana kumaCommonwealth games azobe ebanjelwe eThekwini ngonyaka ka2022. Uma ufuna ulwazi kanye nokubona imiphumela ye2016 PMB MTB Festibal, vakashela ku-http://www.cyclingsa.com/2016-pmb-mtb-festival/.
1.Gregor Raggl (AUT) 01:34:26
1.Mariske Strauss (RSA) 01:26:46
1.Alexander Bunn (GER) 01:31:32
1.Danielle Strydom (RSA) 01:14:45
1.Mlotshwa Lunbelo (uThukela)
2.Ndabenhle Madonsela (uThukela)
1.Olwethu Mgaga (uThukela)
1.Buhlebemvelo Mbatha (uThukela)
1.Lindokuhle Duma (uThukela)
2.Nokwanda Magubane (uThukela)
Summary of Results - 2016 PMB MTB Festival XCO - 2 May
Sub Nipper Boys 1.Connor Wright 00:15:29
Sub Nipper Girls 1.Derryn Millward 00:26:52
Nipper Boys 1.Aiden Wright 00:23:46
Nipper Girls 1.Amelie Owens 00:29:21
Sprog Boys 1.Jonty Watts 00:30:24
Sprog Girls 1.Riley Smith 00:38:12
Sub Junior Boys 1.Travis Stedman 00:34:07
Sub Junior Girls 1.Chloe Bateson 00:36:53
Youth Men 1.Cian Leveridge 00:40:10
Youth Women 1.Bridget Theunissen 00:41:18
Junior Men 1.Dean Wortmann 00:44:39
Leg-power required for National XCO ...